I-Manifesto - Ihlabathi ngoMatshi
Ikhaya » U bonise
Kubonakala kwiHlabathi leMatshi
Emva kweminyaka elishumi emva Ihlabathi lokuqala kwiNkcazo yoxolo kunye noKhuselekoIzizathu ezamshukumisayo, kude kuncitshiswe, ziye zomelezwa. Siphila kwihlabathi apho ukukhula kwe-unilateralism kukhula khona. Indima esisiseko yeZizwe eziManyeneyo ekusombululeni iingxaki zelizwe liphela amandla. Eli lizwe liphuphuma kwiimfazwe ezininzi, uninzi lwazo luphelisiwe. Iingxaki zendalo Iqela leRoma isiqingatha senkulungwane edluleyo Ngezigidi zabafuduki, ababaleki kunye nabantu abahamba kwindawo engqongileyo abanyanzelwa ukuba bacele umngeni kwimimandla egcwele ukungabikho kokusesikweni nokufa. Apho yenzelwe ukucacisa iimfazwe nokubulawa kwabantu kwiimbambano zezixhobo ezinqabileyo. Apho ukungangqinelani kwe "iipropathi ze-geopolitical" phakathi kwamandla amakhulu avelayo kuphakamisa ukungavisisani okutsha kunye nobungozi. Ilizwe apho ukubawa kwabantu abazizityebi kunabo, kwanakumazwe ahambele phambili, naluphi na ulindelo lwentlalo-ntle. Amaza okucaphukisa avelayo agqibezela ukuxhaphaza kunye nokuvelisa iintshukumo ezothusayo zokungakhathalelwa kunye nokutshutshiswa kwabokufika nakwabahambi. Ngamafutshane, ilizwe, apho ukuthetheleleka kubundlobongela, egameni "lokhuseleko", kukonyusa umngcipheko wokunyuka kwezomkhosi kweendlela ezingalawulekiyo.
El UMnqophiso kwiNdawo engeyiyo-Proliferation yezixhobo zeNyukliya, kwi-1970 , kude nasekuvuleleni indlela yenyikima, iye yadibanisa
Amandla otshabalaliso, ukhulisa kwaneklabhu yokufa yokuqala yehlabathi ene-arsenals ngoku esezandleni ze-US, Russia, China, United Kingdom, France, Israel, India, Pakistan, neRiphabhlikhi yaseKorea. Yonke le nto ichaza ukuba kutheni iKomiti yezeNzululwazi ze-Atomic ibeka isalathiso sangoku (IDockday Clock) njengengozi enkulu emhlabeni jikelele ehlala kuyo Inkxalabo yezinto ezilahlekileyo zaseCuba e 1962.
Namhlanje, i I-2ª Ihlabathi leNkqantosi yoxolo noKhuselo, ifuneka ngakumbi kunangaphambili. Kucetywe ukushiya iMadrid ngo-Oktobha i-2 ye-2019 ukukhala onke amazwekazi, de kube ngu-Matshi 8 we-2020 oya kugqiba eMadrid. Iya kuphakamisa imfundo ngokungahambisi ndlongo kwaye ixhase iintshukumo ezikhuselayo kwihlabathi jikelele
Idemokhrasi, ubulungisa bezentlalo nokusingqongileyo, ukulingana ngokwesini, ukubumbana phakathi kwabantu kunye nokuzinza kobomi emhlabeni. Ngomhla we-Matshi efuna ukwenza ukuba kubonakale kwaye kuxhotyiswe ezi ntshukumo, uluntu nemibutho, ekumanyaneni kwehlabathi kweenzame kwezi njongo zilandelayo:
Ukuphakamisa ukukrakra okukhulu kwehlabathi "thina, izizwe " de laUmqulu weZizwe eziManyeneyo, ukuxhasa ISivumelwano kwiNqabana yeZixhobo zeNyukliya, eliphelisa amathuba okuhlaselwa yintlanzi kunye nokukhulula izixhobo zokulungisa izidingo zabantu.
Cwangcisa las KwiZizwe eziManyeneyo , ukunika inxaxheba kuluntu loluntu, idemokhrasi kwiBhunga lezoKhuseleko ukuyiguqula ibe yinyani YeBhunga leSizwe soxolo . kunye nokudala IBhunga lezoKhuseleko kunye nezoQoqosho, eziqinisa izinto ezi-5 eziphambili: ukutya, amanzi, impilo, indawo kunye nemfundo.
Cinga ukuba Isicwangciso sokuCima ukulamba, ngokuhambelana ne-SDGs (iinjongo zoPhuhliso oluKhuselekileyo), enemali efunekayo ukuze isebenze.
Qalisa i Isicwangciso seMilinganiselo engxamisekileyo malunga nazo zonke iintlobo zokugqithisa, ukucwasana, ukucwasana, ukucalulwa kunye nokushushiswa ngobulili, iminyaka, ubuhlanga, ubuzwe okanye inkolo .
Khuthaza a IDemocratic Charter yoLuntu loLuntu, epheleleyo Isibhengezo samaLungelo oluntu (ezopolitiko, ezopolitiko kunye nezentlalo).
Hlanganisa Umqulu weMhlaba kwi-"Agenda yamazwe ngamazwe" we-SDGs, ukujongana ngokufanelekileyo ngenguqu yemozulu kunye neminye imida yokusingqongileyo engapheliyo.
Ukukhuthaza Akukho Vundlobongela ukwenzela ukuba ibe yinyaniso yokuguqula ihlabathi, ukusukela kwinkcubeko yokumisa, ulwaphulo-mthetho kunye nemfazwe kwinkcubeko yoxolo, incoko kunye nokubambisana kwindawo nganye, ilizwe kunye nommandla kumbono wehlabathi jikelele owadluliselwa kuthi Ihlabathi likaMatshi ngoxolo noKhuselo.
Landa iManifesto kwi-PDF
Ileta yeLizwe engenalo Ubundlobongela
Khuphela iManifesto (yesiFrentshi)